भाषाको दाउ- विचार - कान्तिपुर समाचार
लेखक हाल मानवशास्त्रमा एमफिल गर्दैछन् ।
असार २८, २०७६ अमित तामाङ
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘छौंडा’ शब्द प्रयोग गरे । बोक्सीद्वारा तालिम दिइएको पोथी बिरालो भन्ने अर्थ बोकेको यो शब्द प्रयोगले ‘बोक्सी’ को अस्तित्व र मान्यतालाई आत्मसात मात्र गरेन, यसलाई स्थापित गर्न पनि बल प्रदान गर्‍यो ।
यसमा उनको ठूलै आलोचना भयो । यो प्रकरण हुनुभन्दा केही अघिमात्रै एक राष्ट्रिय सङ्गीत सर्जकको सिर्जनालाई लिएर जातीय विभेद जनाउने टिप्पणी भएको थियो । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा भारी आलोचना र प्रतिकार पनि भयो ।
मानव सभ्यताको इतिहासमा भाषा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । शासकहरूले भाषालाई आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । सहज शासनका लागि एक भाषालाई प्रबर्द्धन गर्ने क्रममा मातृभाषा र अल्पसंख्यकका भाषा लोप हुनेमात्र होइन, यससँग जोडिएर आउने संस्कार र संस्कृतिहरू पनि विलिन हुने सम्भावना रहन्छ । भाषाले मानिसहरूलाई एकजुट बनाउन सक्छ भने वर्गीकृत गर्ने सामर्थ्य पनि राख्छ । एउटै भाषामा पनि लवज र शब्द चयनका आधारमा सामाजिक वर्ग निर्धारण गर्ने अभ्यास बेलायतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि विद्यमान छ ।
भाषाको आलंकारिक प्रयोग हुन्छ । अन्य भाषामा जस्तै नेपालीमा पनि विभिन्न उखान, टुक्का, अलंकार र भनाइ छन् । भाषाका यी पक्षहरू समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र मानिसहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छन् । भाषाले सामाजिक मानवीय सम्बन्धलाई प्रस्फुटित पनि गर्छ ।
नेपाली समाजमा हामीले जान–अन्जान प्रयोग गर्ने, बोल्ने, सुन्ने, रमाइलो गर्ने, खिसी गर्ने एउटा अभ्यास व्यक्तिको जात वा बसोबास क्षेत्रका आधारमा गरिने टिप्पणी हो । जस्तै– ‘यो त कस्तो, फलानो जात/समुदायको जस्तो, कस्तो फोहोरी’, ‘यो त कस्तो फलानो ठाउँको जस्तो’ । यस्ता अनगिन्ती तुलना र टिप्पणी हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम गर्न शक्तिशाली वर्ग वा समूहले कमजोरमाथि दोहन गर्ने चरित्रका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लैङ्गिक आधारमा होच्याउने उखान–टुक्का र शब्दावलीहरू पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्त प्रयोगमा छन् । झैझगडा पर्दा ‘मैले चुरा लगाएको छु र’ भन्दै पुरुषत्व प्रदर्शन गर्ने परिपाटी छ । ‘पोथी बास्यो भने अशुभ हुन्छ’ भन्ने भनाइले महिलाको सहभागिता र सक्रियतालाई बन्धक पार्ने काम गर्छ । यी र यस्ता प्रयोगले लैङ्गिक विभेदलाई निरन्तरता दिएको छ । महिलालाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मौन रहन तथा ‘एजेन्सी’ नभएका र प्रतिरोध गर्न नसक्ने समूहका रूपमा चित्रण गर्नमात्र उखान–टुक्का प्रचलित गराइएको छैन, यौनिकतालाई लिएर भद्दा र अपाच्य भनाइहरू स्थापित गराइएका छन् । आजकल त ‘वाइफाइ’ र ‘वाइफ’ को भर हुन्न जस्ता टुक्का बनाएर महिलालाई होच्याउने गरिन्छ । भाषाको नयाँ–नयाँ प्रयोगमा एउटा वर्ग र व्यक्तिले अर्कोलाई अपमान गर्ने दाउहरू खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यस्तै ‘बडी सेमिङ’ अर्थात् शारीरिक मोटोपन या दुब्लोपन र सुन्दरतालाई लिएर गरिने नकारात्मक टिप्पणी पनि उत्तिकै छ । यसबारे सामाजिक सञ्जाल र भेटघाटका क्रममा चर्चा भइरन्छ । जस्तै– काठमाडौँको न्युरोडमा दुई साताअघि बाइक पार्क गर्दैगर्दा एक अधबैंसे उमेरका पुरुषले अर्का २० वर्ष जतिका युवकलाई ‘ए मोटे भाइ’ भनी बोलाए । उक्त युवकलाई ‘मोटे’ भनेको मनपरेन । उनले च्याँठिएर भने, ‘भाइ मात्रै भन्दा हुँदैन, मोटे भन्नुपर्ने ?’ उनीहरू एकअर्कासँग परिचित थिए/थिएनन्, थाहा भएन । तर शारीरिक बनोटका आधारमा सम्बोधन गर्ने अभ्यासलाई ठाडै चुनौती दिने अभ्यास सार्वजनिक स्थलमै देखिन थालेको उदाहरण हो । यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को दृष्टान्त साना बालबालिका जो अचेल सानैदेखि शारीरिक बनोटका आधारमा सम्बोधन गरिएमा तुरुन्त प्रतिरोध गर्छन् । यस्ता घटना घर, छिमेक, विद्यालयमा प्रशस्त देख्न–सुन्न पाइन्छ ।
अचेल यस्ता विभिन्न ‘ट्याग’ लगाउने परिपाटीलाई धेरजसो ठाउँ र समुदायमा प्रतिरोध हुनथालेको छ । जस्तै– हाल ‘एस्किमो’ लाई अपमानजनक शब्दका रूपमा हेरिन्छ, सट्टामा ‘इन्युएट’ प्रयोग गरिन्छ । मानवशास्त्रमा ‘ट्राइब’ लाई अपमानजनक शब्दका रूपमा लिइन्छ र यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिन्छ । शारीरिक अशक्ततासँग सम्बन्धित शब्दावलीहरूमा परिमार्जन हुने क्रम निरन्तर छ । कतिपय सन्दर्भमा सुरुमा अपमानजनक रूपमा प्रयोग गरिएकै शब्दावलीलाई पछि आत्मसात गरेका घटना पनि छन् । उदाहरणका रूपमा समलिंगीलाई बुझाउन प्रयोग गरिने शब्द ‘कोयर’ लाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा पनि केही शब्दले अपमानजनक शब्दलाई प्रतिस्थापन गरेका छन् । विभिन्न आदिवासी र ‘पिछडिएका समुदाय’ लाई बुझाउन प्रयोग गरिएका नयाँ शब्दलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘पिछडिएका समुदाय’ लाई तल्लो स्तरको देखाउन प्रयोग गरिने शब्दावली र उखान–टुक्काप्रति प्रतिरोध गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस्ता पक्षलाई पश्चिमा व्यक्तिवादी दर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र राष्ट्र संघ जस्ता सस्थांहरूका प्रभावको नतिजाका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुन्छ । किनकि भाषा प्रयोगको तरिकाले व्यक्तिको आत्मसम्मान, चिनारी, अस्तित्व र समुदायको समष्टिततासँग सरोकार राख्छ । र यस्ता परिपाटीको विरोध भएको हाम्रै इतिहास छ ।
अपमानजनक शब्द र वाक्यांश प्रयोगले कुनै व्यक्तिको जीवनयापन, मनोविज्ञान र अवसरप्रतिको पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । समुदाय बीचको सद्भावलाई खलल पार्छ भने पक्कै पनि यसमा समयानुकूल परिमार्जन हुन आवश्यक छ । व्यक्ति र समुदायबीच सद्भाव, सम्मान र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । नेपालमा प्रतिकारका प्रयासहरू हुँदैछन् । तर प्रतिरोधै गर्नु नपर्नेगरी भाषा प्रयोग गरे उत्तम हुन्थ्यो । भाषा विना संस्कार र संकृतिको पुस्तान्तरण कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सबै समुदायको सम्मानजनक अस्तित्वका लागि अपमानजनक उखान–टुक्का, भनाइ, शब्दावली र तुलना गर्ने कुपरम्परा अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ ।
यसका लागि रविन्द्रनाथ ठाकुरले भनेझैँ पहिले ‘साँघुरो घरेलु पर्खालहरू’ लाई
तोड्न सक्नुपर्छ ।
लेखक हाल मानवशास्त्रमा एमफिल गर्दैछन् । प्रकाशित : असार २८, २०७६ ०९:१४
अनि उसले लक्ष्मणरेखा टेक्यो
असार २८, २०७६ सुभेच्छा भण्डारी
काठमाडौँ — तयारी बेजोडले भैरहेको थियो । अस्तिको बिहेभन्दा निक्कै । पोखराको लेकसाइडमा क्रिसमस आउँदा जस्तो झिलिमिली । राता र सेता बटारिएका जस्ता पर्दा । खुबै रमाइलो देखिएको थियो, बिहे घर ।
‘खर्च टन्नै गरेछन् । हुन त गुरुङ गाउँ अनि लाहुरेको घर । गाउँघरतिर यस्तै हो मिस । हुनेखानेले अलिअलि झिलिमिली त देखाउनैपर्‍यो नि,’ बिहान ८ बजेको क्लास भ्याएर खाना खाँदै गर्दा एउटा विद्यार्थीले भन्यो ।
मनमनै सोचेँ— मानिसलाई इज्जतको कति चिन्ता छ । अरुले बनाइदिएको इज्जतरूपी ऐनामा ऊ आफूलाई हेर्छ र मूल्यांकन गर्छ— यो समाजमा अरुसँग काँध मिलाएर उभिनलायक छ कि छैन । ऊ अनविज्ञ छ, जुन दिन अरूले त्यो ऐना फुटालिदिनेछन्, उसको अस्तित्व त्यही ऐनासँग टुक्रिएर जानेछ । कति कमजोर छ, मानिस ।
३ गते शुक्रबार । साढे २ बजे टिनिनिनी घन्टी बज्यो । म कक्षाकोठाबाट निस्किएर सिधै स्टाफ रुममा गएँ । सबै सर–मिस आ–आफ्नो कुर्सीमा । मुसुक्क हाँस्दै म पनि चुप लागेर गएर आफ्नै कुर्सीमा बसेंँ । आफ्नै अगाडि टेबुलमाथि राखिएको ‘हार्दिक निमन्त्रणा’ लेखिएको कार्ड खोलेर हेरेँ । त्यसैदिन प्रितीभोज । मन प्रफुल्ल भयो । आँखा अगाडि पुलाउ र मासु घुम्न थाल्यो । मासु नखाएको एक महिना बढी भएको थियो ।
हेडसरले जिस्काउँदै भन्नुभयो, ‘ल मिस आज त तपाईंकै घरतिर खाने निम्तो छ । सबै उतै जानपर्‍यो अब ।’ मैले पनि हाँसोकै पारामा उत्तर फर्काएँ, ‘हजुरहरू आउनुहुन्छ भनेर त त्यत्रो भोज राखिछु । जानैपर्‍यो नि ।’
घरमा म बस्ने धन्सारको दायाँपट्टिको गह्रामा एउटा ठूलो टेन्टभित्र थुप्रै टल्किएका कुर्सी । अनि त्यसको दुई गह्रामुनि सानो टेन्टभित्र केही थान कुर्सी । आहा ! ठानेंँ— तयारी बेजोड नै हो । जता मन भयो, त्यतै बसे हुने । फेरि सोचेँ, सानो टेन्ट झोल पदार्थ खानेका लागि हो कि । त्यसपछि
मैले ठूलो टेन्टमै छिर्ने निष्कर्ष निकालेँ । तर नजिक जाँदैगर्दा मानिसका अनुहार जति प्रस्ट हुँदै गए, मेरो अघिको सोचाइको बाँध चर्किँदै गयो । एक हुल प्रश्नले मनको दैलो बेस्सरी ढक्ढकायो ।
जब सधैँ मिस भन्दै अँगालो मार्न दौडने चार वर्षीया विश्वकर्मा नानीसँग मेरा आँखा जुधे, तब मेरो मनमा भक्कानो फुट्यो । भगवानको रूप भन्छन् हैन र बच्चालाई ? तर ती निर्दोष हातले छोएको भात चल्दैन भनेर त्यो सानो टेन्ट बनाइएको रहेछ । निसासिएझैँ भएँ म ।
आँखा हुँदै छछल्किन लागेका भावलाई रोक्दै त्यो नानुलाई हेर्दै मनमनै प्रश्न गरेँ, ‘के तिमीलाई थाहा छ, किन दुइटा टेन्ट लगाइएका ?’ ती निर्दोष आँखाले मेरो मनको प्रश्न बुझेर मासुको एउटा चोक्टा च्याप्दै मुस्कुराउँदै भनेझैं लाग्यो, ‘हामीले छोको अरूले खान हुँदैन रे मिस, पाप लाग्छ रे । मलाई ममीले भन्नुभाको ।’ त्यही बेला मैले एक दिनको दृश्य सम्झिएँ— मैले पकाउने बेला भान्छाको ढोकानिर बसेर म ’नि भित्र पस्न हुन्छ र भनेर सोधेकी थिइन् ।
मेरो मस्तिष्कमा खैलाबैला मच्चियो । मनबाट रमझमको मोह हट्यो । मासुको मोह मनबाट
हट्यो । तल्लो गह्राको वरपर हेरेंँ । सबै हाँसेर खाइरहेका थिए । दुःखले पेलिएर निस्किएको हाँसो थियो कि त्यो परिस्थिति र समाजले बनाएर देखाइदिएको ऐना ? प्रश्नको भुमरीमा रुमलिएँ म । दुई गह्रा तल मेरा विद्यार्थीका निर्दोष आँखा । दुई गह्रामाथि लाइनमा ठेलिँदै टोलाइरहेकी म ।
अचानक ट्रेनिङको याद आयो । दोस्रो दिन (हंगर ब्याङ्केट) निलो कार्ड पाएर भुइँमा बसेको दिन । म पनि खुसी थिएँ । नुन, प्याज र निस्तो भात खाँदा म सबैसँग मिलेर गीत गाउँदै थिएँ । अनि रातो कार्ड पाएर कुर्सीमा बसी मासु र सुप खाने पनि आफ्नै धुनमा मस्त थिए ।
भुइँमा बसेर निस्तो भात खाँदा कुर्सीमा बसेर मासुभात खानेका विरुद्ध किन आवाज उठाउन सकिन होला मैले ? किन यसै रमाएँ होला ? के त्यो निलो कार्डले मलाई समाज बनेर ऐना देखाइदिएको थियो ? लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको थियो ? जसलाई नाघ्न खोज्दा मेरो अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने थियो । के सानो टेन्टकाहरूले पनि त्यही सोचेर रमाएर खाएका होलान् ? के असमानताको भारीलाई घाँसको भारीझैं सजिलै बोक्ने बानी पारिसकेका छन्, उनीहरू ?
सोचैसोचमा डोरिँदै लाइनमा धेरै अगाडि पुगिसकेछु । निराशाका बादल लागेका आँखाले अरु खुसी अनुहारलाई हेर्दै पाइला सार्दासार्दै हातमा प्लेट लिएर कुर्सीमा बसिसकेछु । तर गलामा अड्केको पीडाले भात निल्न दिएन । अशान्त आँखाहरूले भौँतारिँदा–भौँतारिँदै एउटा अनमोल दृश्य देखेंँ । ठूला–ठूला कदका भिडलाई छिचोल्दै ती साना कद । मानिसको गुँडमा जन्मिएर पनि आकाश ताकिरहेका ती आँखा ।
जसका भागमा छ— एक प्लेट खुसी जहाँ दुई चोक्टा मिठास होस् र एक डाडु ठट्टा । र त्यसलाई निल्न एक गिलास हाँसो । ती ४ जनामध्ये एकजना साथीलाई छोड्न नसकेर सानो टेन्टबाट भागेर आएको रहेछ । कदमा सानो भए पनि सबैभन्दा आँटिलो थियो ।
परिवर्तनको सम्वाहक थियो । वरपर हेरेँ, धेरैका चिल नजर उसलाई नै ताकिरहेका रहेछन् । तर ऊ अघि बढ्यो । केही नसोची अघि बढ्यो । सबैको अगाडि अघि बढ्यो । समाजले बनाइदिएको ऐना तोड्न अघि बढ्यो । उसले लक्ष्मणरेखा टेक्यो । आँखा के झिम्किएको मात्र थियो, पछाडिबाट उसलाई कसैले तानेर उसलाई त्यो रेखा नाघ्न दिएन । त्यो दिन असमानताको भिडलाई चुनौती दिँदै परिवर्तनको झिल्को त्यहाँ पस्यो । मैले कामना गरेंँ— तिमी कहिल्यै हार नमान्नु । अनि प्रतिज्ञा गरेंँ– म पनि लागिपर्ने छु, दिनदिनै यस्तै जनशक्ति विकास गर्न ।
त्यस दिनदेखि दुइटा प्रश्नहरूले गिज्याइरहेछन्— शिक्षक भनेर सम्मान गरेको समाजले यदि म दलित परिवारकी भएको भए कुन टेन्टमा स्वागत गर्थ्यो होला ? र चलनचल्तीको पट्टी आँखामा लगाइदिएर मुख चुप गराइदिन सक्ने शक्तिशाली समाजलाई परिवर्तन गर्न हामी कति शक्तिशाली बन्नुपर्ला ?
लेखक टिच फर नेपालमार्फत श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, लमजुङमा अध्यापन गर्छिन् ।
प्रकाशित : असार २८, २०७६ ०९:०७
अपडेटः शनिबार, २४ साउन, २०७७ । ०६ : ४० बजे